इटहरीः अचेल हाम्रा केही पत्रकारहरुमा एउटा फेसन चलेको छ, कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट फेसबुकमा हाल्ने, हल्ला गर्ने, म त कोरोना नेगेटिभ हो है भन्दै। विगत केही दिनदेखि यो क्रम बढ्दो छ। पत्रकारका आफू आवद्ध संस्थाहरुबाट पाएको कोटामा कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्नेहरुको अनुहार हेर्दा कोरोना लागेपछि घरैमा बसेर काम गरिरहनेहरु पनि छन्। जोखिम भएका ठाउँमा गएर रिपोर्टिङ गर्नेहरु, फोटो खिच्नेहरुको परीक्षण आवश्यक होला। पत्रकार भएका कारण भाडामा बसेको ठाउँमा घरबेटीले पस्नै नदिएका कारण चेक गराउनु परेको बाध्यता पनि होला। त्यो एक ठाउँमा छ। तर संक्रमित ठाउँ वा मान्छेसितको कन्ट्याक्ट हिस्ट्री नभएकाहरुले पनि चौथो अंगको पावर देखाएकै भरमा परीक्षण गराएर गौरवका साथ नेगेटिभ रिपोर्ट हाल्दै गरेको पनि देखिएको छ। पावर लगाएर वा लागेर परीक्षण भयो होला, ल छाड्दिम्। तर रिपोर्ट सोसल मिडियामा हाल्नुको अर्थ के? नहोस् त्यस्तो तर कथंकदाचित कसैको पोजिटिभ आएको भए उनीहरु यसैगरी रिपोर्ट हालेर म संक्रमित भएँ भन्न सक्थे होला? अनि यो नेगेटिभ रिपोर्ट आउनुको मतलब कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको जस्तो त पक्कै होइन, तपाईँले परीक्षण गराउन जाँदा त्यहाँ कोही संक्रमित भएर सरेको पनि हुनसक्छ।
अर्थात् तपाईँले यसरी कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट राख्नु भनेको तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी विगतको र भविष्यको पनि सम्पूर्ण जानकारी सबैको पहुँचमा हुने गरी सार्वजनिक गर्नु हो।के तपाईँ यसरी नै आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु सार्वजनिक भएको रुचाउनु हुन्छ ? रुचाउनु हुन्न भने बन्द गर्नुस् यो नचाहिने काम। तपाईँलाई कोरोना लागेको छैन( राम्रो भो। सुरक्षित रहनुस्। तर मैले पिसिआर परीक्षण गराएँ, तैँले गराउन सकेको छैनस्। म सुरक्षित छु, तँ सुरक्षित छैनस् पाराको फूइँ सोसल मिडियामा देखाउन खोज्दा आफै नाङ्गो भइरहेको हुनसक्छ, सावधान !
धेरैले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो भने अहिले परीक्षण नै गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँ र कतिपय व्यक्तिहरुको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। कसले चेक गराउने र कहिले गराउने, कसले नगराउने भन्ने विषयमा सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ।यो महामारी अहिले सल्किरहेको छ। त्यसैले पहिला जोखिममा भएकाहरुको परीक्षण गराउनमा जोड दिउँ। पत्रकारहरु पनि कन्ट्याक्ट हिस्ट्रीका आधारमा, लक्षणका आधारमा जोखिममा परेका होलान्, उनीहरुको परीक्षणमा जोड दिउँ, फेसबुकमा शान देखाउनका लागि परीक्षण नगरौँ। गरे पनि फेसबुकमा रिपोर्ट हालेर जोखिम नबढाउँ।माईसन्सारबाट